Waxaan daawaday inta badan heshiisyada siyaasadeed, kuwaas oo labadii toddobaad ee la soo dhaafay. Afhayeenka guud igu taal oo aan kaa gargaari kara laakiin tiro ka badan-falanqeeyaan Fariimaha iyo xirfadaha codkarnimada ka mid ah musharraxiinta iyo taageerayaashooda. Every person...
Halkan khudbad Waxaan dhawaan wacdiyey on Sabuurradii 95:10-11. My 3 dhibcood way fudud yihiin: waxaan. Dembigu dhirfinaya Cadho Ilaah II. Dembigu waa Jidka Alernate ah III. Sin keeps us from God’s rest I...
Safarka Lee on "Life Beautiful” Ilaah ka yimid waxay doonayaan on vimeo. song ugu horeeyay ee aan qoray aan album ugu dambeeyey, “Life The Good” ahaa song ah oo lagu magacaabo "Beautiful Life.” Desiring God asked me...
Waxaan doonayaa in aan bilaabi by reading xigashooyin qaar ka mid ah. Sidaas oo keliya si wacan u dhegeysto iyo ka fikir haddii aad ku raacsan tahay waxa uu sheegay in. “Anger dwells only in the bosom of fools.” – Albert...